चुट्किलाः प्रेमिकाले गोरेलाई रोएर देखाइदिन भनेपछी... - Everest Dainik - News from Nepal
चुट्किलाः प्रेमिकाले गोरेलाई रोएर देखाइदिन भनेपछी…
गोरे र उसको प्रेमिका एक दिन टाढा घुम्न गएछन् ।
माया प्रेमका कुरा गर्दै जाँदा गोरेलाई प्रेमिकाले सोधिछनः तिमी मलाई कति माया गर्छौ गोरे?
गोरेः एकदम धेरै माया गर्छु म तिमीलाई प्रिय ।
प्रेमिकाः म मरेपछि पनि माया गरिरहन्छौं ।
याे पनि पढ्नुस दाईजोमा मोटरबाईक दिएपछि...
गोरेः अँ ।
प्रेमिकाः म मरे भने मलाई सम्झेर रुन्छौ?
गोरेः अँ, रुन्छु नी प्रिय ।
प्रेमिकाः त्यसो भए एकपटक रोएर देखाउ न ।
गोरेः पहिला, तिमी मरेर देखाउ न ।
गोरेको एक मिनेटमै ब्रेकअप ।